यस्तो हस्त रेखा हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै धनी…..! तपाईँको पनि छ की ? – Khabar PatrikaNp
यस्तो हस्त रेखा हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै धनी…..! तपाईँको पनि छ की ?
August 25, 2020 84
समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार, कुनैपनि व्यक्ति कतिको भाग्यमानि छ, धनी हुन्छ की हुँदैन भन्ने उसको हस्तरेखाबाट थाहा हुन्छ। हस्त रेखा सबै व्यक्तिको जन्मकै क्रममा बन्छ र ती रेखाको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ।
जौको चिन्हः जुन ब्यक्तिको हातमा जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनी र सुखी हुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तो चिन्ह हुने मानिस धनी र बैभवशाली मात्र होइन भाग्यमानी पनि हुन्छन्। उनीहरुको समाजमा मान प्रतिष्ठा पनि उत्तिकै हुन्छ।
शंखको चिन्हः कुनैपनि व्यक्तिको हातमा शंखको चिन्ह हुनु पनि औधी राम्रो मानिन्छ । त्यस्ता ब्यक्ति बुद्धीमानी हुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । जुन व्यक्तिको पाँच वटा औंलामा शंखको चिन्ह छ भने त्यस्ता व्यक्ति विदेश भ्रमणमा गई नै रहन्छन्। समुन्द्र शास्त्रमा बताइए अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले विदेशमा धन आर्जन पनि राम्रो सँग गर्न सक्छन्।
चक्रको चिन्हः जुन व्यक्तिको १० वटै औंलामा चक्र छ भने त्यसता ब्यक्ति संसार जित्ने ब्यक्ति हुने समुन्द्र शास्त्रमा दाबी गरिएको छ। यति एउटा मात्र औंलामा चक्र छ भने चाहिं त्यस्ता व्यक्ति विद्वान हुन्छन्। कुनै व्यक्तिको दुइवटा औंलामा चक्र छ भने त्यस्तो व्यक्ति निकै नै सुन्दर हुने मानिन्छ।
सूर्य पर्वतः कुनैपनि व्यक्तिको हातको औंलाको फेदमा सूर्य पर्वत हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक र सरकारी उच्च क्षेत्रमा पुग्छन्।
Prevकोरोना संक्रमणबाट बाबुको मृ’त्यु, कि’रियापुत्री बसेका छोरालाई गाउँलेले घरबाटै ल’खेटे…..!
Nextयि ५ राशिलाई मंसिर १ गतेसम्म लाग्नेछ साढे ७ को दशा, यसरी पाउनुहोस छुटकरा ..!
मंगलबार बिहानै गर्नुहोस् भगवान गणेशजीको पुजा,मिल्ने छ लाभै लाभ…!
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27909)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27727)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14842)